သမ္မတရှီ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်ကို ကုလအကြီးအကဲဂူတာရက်စ်က အလေးထားပြောကြား - Xinhua News Agency
ဂလက်စကို ၊ ဗြိတိန် ၊ နိုင်ဝင်ဘာ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်၏ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံစုံပါဝင်သော သဘောတူညီမှု ဆုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အစိမ်းရောင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အဆိုပြုချက်များအပေါ် အလေးထား ပြောကြားခဲ့သည်။“၂၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်း” ညီလာခံ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးအစည်းအဝေး (COP26) သို့ စာဖြင့် ပေးပို့သည့် ရှီ၏ မိန့်ခွန်းအပေါ် ဂူတာရက်စ်က နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ရှီ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ၊ COP26 ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဂေဟစနစ် နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဖြစ်သူ Zhao Yingmin နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် အပြုသဘောဆောင် အလေးထားမှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Liuzhou မြို့ရှိ ကားစက်ရုံတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး လုပ်ကိုင်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
COP26 ညီလာခံ၌ တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် အစဉ်တစ်စိုက် အပြည့်အဝ လွှမ်းမိုးမှုအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ရန် ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို တွန်းအားပေးမြှင့်တင်ရန် နှင့် COP26 အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းအနေဖြင့် မျှော်လင့်ကြောင်း ဂူတာရက်စ်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း Guizhou တွင် တည်ဆောက်ထားသော လေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ရဟတ်များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် ၁၉ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နှစ်ဖက်စလုံးက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးအကြား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် ၊ အစိမ်းရောင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို တွန်းအားပေးရန် ၊ တောင် နှင့် မြောက်အကြား နိုင်ငံရေးအရ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု တိုးမြှင့်ရန် ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ငွေကြေး နှင့် နည်းပညာ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးရန် နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ခက်ခဲသောအခြေအနေကို အောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရေး အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရန် စသည်တို့အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များစွာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သဘောထားအမြင်များ ဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရသည်။(Xinhua)
UN chief speaks highly of President Xi’s proposals on addressing climate change
GLASGOW, Britain, Nov.3(Xinhua) — United Nations Secretary-General Antonio Guterres spoke highly of Chinese President Xi Jinping’s proposals of upholding multilateral consensus, focusing on concrete actions and accelerating the green transition to address global climate change.
Guterres made positive comments Monday on Xi’s written statement for the World Leaders Summit at the 26th session of the Conference of the Parties (COP26) to the UN Framework Convention on Climate Change when he held talks with Xie Zhenhua, special representative of Xi and China’s special envoy for climate change, and Zhao Yingmin, head of the Chinese delegation to COP26 and vice minister of the Ministry of Ecology and Environment.
Guterres said he hopes the Chinese delegation would, as always, give full play to its influence at COP26, strengthen communication and coordination with all parties, and contribute to the success of COP26.
The two sides also exchanged views in depth on issues that include strengthening pragmatic cooperation among all parties, promoting the green transition, enhancing political mutual trust between the South and North, fulfilling the pledges of financial and technical support to developing countries, and working together to cope with climate change.
1-UN Secretary-General Antonio Guterres addresses the opening ceremony of the World Leaders Summit at the 26th United Nations Conference of Parties on Climate Change (COP26) in Glasgow, Britain, Nov. 1, 2021. (Xinhua/Han Yan)
2-Workers assemble new energy vehicles at an automobile company in Liuzhou, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 12, 2021. (Photo by Li Hanchi/Xinhua)
3-Aerial photo taken on Aug. 19, 2020 shows wind turbines at the Jiucaiping scenic area in southwest China’s Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)
တရုတ်သွင်းကုန်ပြပွဲမှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းများအား ကာဇက် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ စိတ်ဝင်စား
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးလူနာပေါင်း ၅ သန်းကျော် ရှိလာကြောင်း WHO ပြောကြား